သောကြာနေ့အနက်ရောင် - အားလုံးအပေါ် 15%! | ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » Black ကသောကြာနေ့: - 15% ဟာ Off အားလုံး!
Black ကသောကြာနေ့ *: - 15% ဟာ Off အားလုံး!
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုယူပြီး 28 နိုဝင်ဘာ 2019 မှ 01 ဒီဇင်ဘာ 2019 သို့သင့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုရယူပါ။ ခရစ်စမတ်ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း Sexy ရပ်ဂ်ဘီဖက်ရှင်စတိုးတွင်ရှိသောအနက်ရောင်သောကြာနေ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အားလုံးရာသီတွင် -15% ပါဝင်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်ချည်မျှင်ဖြစ်ပါသည်
Sexy Rugby သည်အရည်အသွေးပြည့်မီသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရှိတယ် ရပ်ဂ်ဘီချွေးထွက်များ တစ် ဦး streetwear စတိုင်, ဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးဂန္မှကိုက်ညီ။
ထို့အပြင်၊ နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီများရှိသင်၏အားကစားလေ့ကျင့်မှုတွင်သင်နှင့်အတူပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အဆိုပါရပ်ဂ်ဘီချွေးထွက်အင်္ကျီကိုအချိန်တိုင်းတွင် ၀ တ်ဆင်လိုသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ဂျင်းဘောင်းဘီများနှင့်လှပသောဖိနပ်များသို့မဟုတ်နွေရာသီအေးသောညနေခင်းများအတွက်ဘောင်းဘီတိုများနှင့်အတူရပ်ဂ်ဘီချွေးထွက်အင်္ကျီကိုရာသီဥတုအားလုံးတွင် ၀ တ်ဆင်သည်။
အခြေအနေအားလုံးတွင်ပုံစံပြုပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသည့်ထုတ်ကုန် -15% ရှိ
တူညီသောစိတ်ဓာတ်၌, အွန်လိုင်းစတိုး sexy ရပ်ဘီ တစ်ဦးအလင်းထိတွေ့ပူဇော်ဖို့အားလုံးကိုသင့်ရဲ့စတိုင်များကိုက်ညီသောစတိုင်ထုတ်ကုန်ပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါသည် အပေါင်းပါ mode ကို, သင့်စတိုင်မှ nonchalance တစ်သိသိသာသာထိတွေ့ပေး။
အနက်ရောင်သောကြာနေ့နှင့်အတူ Sexy Rugby ထုတ်ကုန်များနှင့်စတိုင်များကိုပေါင်းစပ်။ ဖန်တီးပါ
ထို့အပြင်ဖက်ရှင်ဆိုင်မှ beanie-jersey beanie သည်ကမ်းလှမ်းထားသောအခြားအပိုင်းများကိုအပြည့်အဝကိုက်ညီလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်, အထူးသဖြင့် လူတို့သညျအဘို့ချွေးထွက် hoodie သို့မဟုတ် Sexy ရပ်ဘီအမျိုးသမီးတွေအတွက်။
ထိုနည်းတူစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေးများနှင့်အရောင်များသည်သင့်အားအကောင်းဆုံးနှင့်ကိုက်ညီသောစတိုင်လ်များကိုဖန်တီးရန်သင့်အားပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ဒီတော့အနက်ရောင်သောကြာနေ့ကို -15% နဲ့ပျော်ပါ။
ပိုပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်ချင်ပါသလား။ Sexy Rugby ၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြင့်သင့်ကိုအပန်းဖြေအနားယူစေမည့် ဦး ထုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
* အပြာရောင်သောကြာနေ့အတွက် 01 / 12 / 2019 သည် -15% အထိသာကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ဖက်ရှင်ရပ်ဂ်ဘီ (Sexy Rugby) တွင်သာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ *: - အားလုံးအပေါ် 15% နှင့်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး! "